HERO OF MYANMAR: နော်ဝေရောက် မြန်မာများအား Social က ကျွေးထားတာ အေးဆေးစားကြရန် မေကိုလတ် မှ ပြောကြား
[21:57 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
နော်ဝေနိုင်ငံရောက် မြန်မာအချို့ကို Social က ကျွေးထားတာ အေးအေးဆေးဆေးစားဖို့ အတွက် http://mabaydar88.blogspot.com/ ဘလော့ကို ရေးတဲ့ မဗေဒါ (ခေါ်) မအေးအေးခိုင်ရဲ့ သမီး မေကိုလတ် (ခေါ်) ဒီဇင်ဘာက ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ပြောဆိုချိန်မှာ ဒေါသ ထွက်နေဟန်ရှိပြီး နော်ဝေကိုတောင် သောက်နော်ဝေ လို့ သုံးနှုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ နော်ဝေက မြန်မာတွေကို Stupid People တွေလို့ ပြောဆိုထားပြီး နော်ဝေမှာ မနေသင့်ကြတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
မေကိုလတ် (ခေါ်) ဒီဇင်ဘာ ဟာ အစိုးရအတိုက်အခံဘလော့ရေးနေတဲ့ မဗေဒါရဲ့ သမီး ဖြစ်ပြီး http://nge-naing.blogspot.com ကို ရေးသားသူ မငယ်နိုင်ရဲ့ သွန်သင် အုပ်ထိန်းမှု အောက်မှာ ကြီးပျင်းလာရသူဖြစ်ပါတယ်။ မဗေဒါက ယောင်္ကျားနှစ်ယောက် ယူခဲ့တဲ့ အပြင် မငယ်နိုင်ကပါ မိုးသွေးငယ်နဲ့ ဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့် တစ်ယောက်တည်းနေကာ စိတ်ထင်တိုင်း ကျဲပြီး လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မေကိုလတ်ဟာ အသက် ၁၇ နှစ် မပြည့်ခင်မှာ ရုရှားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အစိုးရစစ်တပ်က စစ်ဗိုလ် တစ်ဦးနဲ့ အတူ အိပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မဗေဒါတို့၊ မငယ်နိုင်တို့ ခြေရာကို နင်းကာအစိုးရအတိုက်အခံတို့ ထုံးစံအတိုင်း နောက်တစ်ယောက် မက နဲ့ အတူနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
မေကိုလတ်အကြောင်း အစုံအလင်ကို သွန်သင်ထိန်းကျောင်းလာတဲ့ မငယ်နိုင်က သူ့ဘလော့မှာ အခုလို ရေးထားပါတယ်။
" ဒီဇင်ဘာ (ခ) မေကိုလတ် ကို ကျွန်မ စပြီး တွေ့ဖူးတာ ကတုံးဆံပင်လေးနဲ့ စကားပြောသင်ခါစ၊ လမ်းလျှောက်သင်ခါစ တနှစ်တောင် မပြည့်သေးပါဘူး။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းလတွေမှာ ABSDF ဗဟိုက ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Rehabilitation Centre မှာ ယူနီဖေါင်းချုပ်ရာမှာ နှစ်ပတ်ခန့် သွားဝိုင်းလုပ်ဖို့ ကျွန်မနဲ့ အတူတာဝန်ကျတဲ့ သူ့အမေနဲ့ ပါလာရာမှ ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လုပ်အားသွားပေးရတာ သူတို့အမေနဲ့ ကျွန်မကလွဲရင် အကုန်ုလုံးက အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲ ဆိုတော့ သူတို့သားအမိနဲ့ ကျွန်မနဲ့ အရင်ကမသိပေမဲ့ အဲဒီမှာ တော်တော်လေး ရင်းနှီးသွားပါတယ်။ အဲဒီမှာ နှစ်ပတ်ခန့် သွားဝိုင်းလုပ်ပြီး သူတို့သားအမိကလည်း မိသားစုရွာဖြစ်တဲ့ သံလွင်မြစ်ရဲ့ ထိုင်းဘက်ကမ်းအနည်းငယ် ၀င်ရတဲ့ နေရာမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ရောင်နေဦးကိုပြန် ကျွန်မလည်း ဗဟိုဌာနချုပ် ဒေါင်းဂွင်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့အမေက ပြန်ကြားရေးတာဝန်နဲ့ ဒေါင်းဂွင် စတူဒီယိုမှာ DVB အတွက် အသံလာသွင်းဖို့ ဗဟိုကို ရောက်လာတိုင်း ဒီဇင်ဘာကို ကျွန်မပဲ တချိန်လုံး ခေါ်ထားတာ များပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာကလည်း ကျွန်မနဲ့ဆို တနေကုန်နေပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာဟာ အငိုသိပ်သန်ပေမဲ့ ကျွန်မလက်ထဲမှာ တနေကုန်နေလည်း ဘယ်တော့မှ မငိုတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဆောင်က တခြားမိန်းကဘေးတွေက လိုက်စရင် ဗြဲကနဲ အသံကုန်ဟစ်ပြီး အော်ငိုတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငိုစရာမဟုတ်ပဲ ငိုလွန်းလို့ဆိုပြီး သူ့အမေက ဒီဇင်ဘာ မငိုတဲ့နေ့များ တနေ့တလေ ရှိခဲ့ရင် အဲဒီနေ့မှာ သမီးကိုမေမေ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့်မယ် လို့ ဒီဇင်ဘာ ၁ နှစ် မပြည့်ခင်ကနေ ပြောလာခဲ့တာ ၄ နှစ်ခန့်အရွယ်ထိ ကြားရဆဲပဲ။ ဒီဇင်ဘာနဲ့ ရင်းနှီးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့နေတဲ့ ရောင်နီဦးကို သွားဖြစ်တိုင်း သူတို့အိမ်မှာပဲ တည်းဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၇ နှစ် မပြည့်ခင် ရုရှားမှ စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးထံ အတူသွားအိပ်စဉ်က
နော်ဝေမှာ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အတူနေပြန်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ
တောထဲမှာ ဒီလို ကြီးပြင်းခဲ့ရတာများလား
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့မှာ မိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီဇင်ဘာ
ကျွန်မက ဘဏ္ဍာရေးမှာ လုပ်တော့ ပိုက်ဆံထုတ်တဲ့သူတွေက ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မီတီဝင် တယောက်ယောက်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် လက်မှတ်ပါတဲ့ ငွေပမာဏ ရေးပြီးသား ငွေထုတ်ပြေစာ တခုယူလာပြီး ကျွန်မဆီမှာ လာထုတ်ရပါတယ်။ ပြေစာမှာ ခွင့်ပြုသူရော ထုတ်ယူသူပါ လက်မှတ်ရှိရမှာ ဖြစ်လို့ ကျွန်မက ထုတ်ယူသူ လက်မှတ်တိုးရမယ့် နေရာမှာ လာထုတ်သူကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးမှ ပိုက်ဆံကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာက ဒါကို အမြဲမြင်တွေ့နေရတော့ လက်မှတ်ထိုးရင် ပိုက်ဆံရမယ် ဆိုတာပဲ သူသိနေတယ်။ ဒီဇင်ဘာ လက်မှတ်ထိုးချင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သဘောပေါက်သွားတော့ ကျွန်မက ဒီဇင်ဘာ ပြောတာ ယောက်ျားယူရင် ထိုးတဲ့လက်မှတ်ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး ပိုက်ဆံထုတ်ရင် ထိုးတဲ့လက်မှတ်ကို ပြောတာလို့ ပြန်ရှင်းပြမှ သူ့အမေလည်း စိတ်အေးရပြီး ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ရီရတော့တယ်။ ဒီဇင်ဘာက သူ့ကို သူ့အမေ ဆူတာဖြစ်စေ၊ ဆုံးမတာဖြစ်စေ သူ့အမေရဲ့ စကားလုံး ကြီးကြီးတွေကို အဓိပ္ပါယ်သာ နားမလည်ပေမဲ့ စကားလုံးတွေကိုတော့ တလုံးမကျန် အကုန်မှတ်မိနေပြီး သူ့ကို သူ့အမေ တခုခု ပြောပြီးတိုင်း ဗဟိုလာလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားသူတယောက် ၀ယ်လာပေးထားတဲ့ ဗိုလ်မရုပ်လေးကို အရှေ့မှာထားကာ သူက အမေနေရာကနေပြီး သူ့အမေလေသံနဲ့ သူ့အမေ သူ့ကိုပြောတဲ့ အသံနဲ့ အမူအယာအတိုင်း တူအောင် တုကာ တခွန်းမကျန် အရုပ်ကို အကုန် Lecture ပြန်ရိုက်တော့တယ်။ ဒီဇင်ဘာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေကတော့ ပြောမယ်ဆို ကျွန်မမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ဒါက နော်ဝေက တစ်ယောက်နဲ့
တောထဲတုန်းက ဒီလိုနေခဲ့ရတာ တဲ့.. မထင်ရဘူးနော်
Ma Bay Dar အော် ငယ်ငယ်တုန်းက အင်မတန်ကို ချစ်စရာကောင်းခဲ့ပါလားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး..... အင်း ...အခုတော့လည်း ...အင်း.... ချစ်စရာကောင်းပါတယ်...
19 December 2010 at 16:38 · 1 personLoading...
Mayco Latt အမေ... အဲ့ဒါတွေကြောင့် အမေ့ကို သမီး delete ထားတာ. . မခံစားနိုင်ဘူး. . ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. .
Htay Thanhtwaykyu အော် သမီးက အမေကိုတောင်ဒီလိလုပ်ထားတယ်ဆိုပါလား အန်တီကိုလုပ်ထားတာကိုလည်း ခံစားနိုင်ရမှာပေါ့။ ဘာဖြစ်ဖြစ်သမီးရယ် အဲဒီတုန်းကအတူဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသူတွေ သမီးကို အဲဒီတုန်းကလိုပဲ ချစ်တုန်းပါပဲ။ စပရိုက်ဘူးခွံအစိမ်းလေးတစ်လုံးကို ပိုက်ပြီး အမီးရဲ့ အမီးလေးဆိုပြီး အမေသမီးကိုဆူတဲ့လေသံအတိုင်းလုပ်ပြီး အဲဒီပုလင်းလေးကို မျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲ့ ဆူဆူနေတတ်တဲ့သမီးငယ်ဘ၀လေးကို အန်တီတွေးတိုင်းမျက်ရည်ဝဲတယ်သိလား။ သမီး ၁၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် အသက်ရှင်သရွေ့ကာလပတ်လုံး ကိုယ့်ခြေပေါ်ကိုယ်မားမားရပ်တည်လို့ မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့သမီးရတနာဖြစ်ပါစေ အန်တီဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟုတ် အန်တီ..ကျေးဇူးများကြီးတင်၏ .
ဟုတ်ဘူး..အမေလေ..သမီးတင်တဲ့ပုံတွေက နည်းနည်း တိုနေတော့ ..သူရှက်တယ်လေ..အဲ့ဒါ သမီးလဲ အမေ့အသိတွေရှိနေရင် အမေမျက်နှာပျက်မှာဆိုးလို့ ..အမေ့အသိ..သမီးအကုန်ဖျက်ထားတာ အန်တီငယ်ကတော့ ရပါတယ်ဆိုလို့ သမီးလဲ. . မဖျက်ပဲနေတာပ...ါ. .
thank u so much aunty!..;)See more
Zaw Lin Htwe မငယ်ရေးတင်ပြမှု့ တအားကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ် ဒီဇင်္ဘာက စကားတတ်တယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ်။ မငယ် တင်ပြမှု့ကလည်းကောင်းတော့ ABSDF အကြောင်းလေး လွှမ်းမောဖွယ်လေးတွေတော့ ဖြစ်ကုန်တယ် ။ အခုလဲ ဒီဇင်္ဘာက လိမ္မာပါတယ်။ ကျန်တော်တို့ မဗေဒါတို့ နိုင်ငံချင်း နီးတော့ သွားသွားလာလာ ရှိကြတယ်လေ။ အခုတော့ ဒီဇင်္ဘာက အရင်ကထက်တောင် ပိုတော်လာပါတယ်။ ဦးကျော်နိုင်ကြီးကိုလည်း သတိရပါတယ်လို့
Htay Thanhtwaykyu ကိုအောင်ဖြေအေးရေးလိုက်မှပဲ ပိုပြီးသတိရစေတယ် အဲဒီတုန်းက ဒီဇင်ဘာအမေကို ပိုးကြပန်းကြသူတွေမနည်းဘူးပဲ ကိုစိန်ဝင်းကြီးထီပေါက်သွားတယ် ဟိဟိ ကျမအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကြီး တစ်ယောက်တောင်ပါလိုက်သေး
Aung Khaing Myint- ဒီပို့စ်ကို ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်ရင် ဘလော့ဂ်က တိုက်ရိုက်ပြန်ကူးယူတာက ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ http://nge-naing.blogspot.com/ မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါနော့်။ သမီး ဒီဇင်ဘာ အမေကို block လုပ်ထားတာ ပြန်ဖိတ်သင်...့ပါတယ်။ သမီးသူ့ကို ပိတ်ထားတော့ သမီး No Vote တုန်းကရော အခုလက်ပါ ဒီမိုကရေစီရေးမှာပါ Face Book ကနေပြီး နအဖ စစ်အုပ်စု ဘက်တော်သားတွေကို အချက်ကျကျ ဘယ်လိုပြန်ငြင်းပြီး ပါဝင် တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာ အမေမသိလိုက်ဘူး။ အခုဒီမှာ သမီးကို မှတ်ချက် လာရေးထားတဲ့ မောင်စန်းမောင် အပါအ၀င် ငယ်နိုင်ဘလော့ဂ်နဲ့ Face book မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပက လူငယ်တွေ ရောက်လာပြီး သူတို့မသိသေးတာတွေ သိရဆတယ်လို့ ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုလာသူတွေဟာ ဒီဇင်ဘာဆီက လာတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတော်များပါတယ်။ သူငယ်ချင်း မဗေဒါ သမီးက အမေခြေရာကို နင်းပါတယ်။ အန်တီဝင်း ၀တ်မှုံကို ကျွန်မလည်း အမြဲသတိရနေပါတယ်။ သူ့မှာ Facebook ရှိရင် ကျွန်မ လိုချင်ပါတယ်။ ဌေးငယ် ဒီဇင်ဘာကို ပြန်ဖိတ်လိုက်လို့ ရတာပဲ။ ဦးမျိုးသိန်းကလည်း အချင်းချင်း မြှောက်နေပြန်ပြီ။ မောင်စန်းမောင်နဲ့ ကိုအောင်သာငယ် ကျေးဇူးပဲ သမီးမွေးနေ့အမှတ်တရပို့စ်မှာ အမှတ်တရ လာရေးပေးသွားတာ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး ဒီဇင်ဘာက ကလေးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ လူကြီး ဖြစ်သွားပါပြီ...See more
May Sue Pwint မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဒီဇင်ဘာ။ သမီးအိမ်သာတက်ရင်း အမေကိုအတင်းပြောတဲ့အကြောင်းလေး အန်တီလည်း ရေးလိုက်ရမလား။
Mayco Latt သမီးအကြောင်းကလဲ အမျိုးမျိုးပါပဲလားနော်. . ဟဲဟဲ..
Ma Bay Dar အော် ငါငယ်ငယ်တုန်းက ငါ့အကြောင်းနဲ့ သမီးအကြောင်း ...အင်းးးးးးးးးးးး.... ရင်တုန်စေပါ၏................